Kufambira mberi Kwevanhu uye Dell Technology Nyika | Martech Zone
Kufambira mberi Kwevanhu uye Dell Technology World
Svondo, May 13, 2018 Douglas Karr
Kana iwe ukangoteerera kune tekinoroji kuburikidza neyakajairika masosi enhau, iwe ungangofunga mota dzinozvimiririra dziri kuuraya vanhu, marobhoti ari kutora mabasa edu, uye tekinoroji iri kutitungamira isu kukuparadzwa. Sevashambadziri, ndinofunga zvakakosha kuti isu tirege kungoteerera anotevera mhondi app kunze uko, tinofanirwa kunge tichiona kuti tekinoroji iri kukanganisa sei hupenyu uye hunhu hwevatengi nemabhizinesi.
Chokwadi nezve shanduko yedhijitari zvakapesana chaizvo.
Ngatitangei nemota dzinozvimiririra. Vanhu vanoramba vaine tsaona dzinouraya mota, vachiuraya avhareji ye3,287 maAmerican mazuva ese. Dzine hungwaru mota hadziuraye… ivo vari kuzoponesa hupenyu. Muchokwadi, ini ndinofungidzira kuti vatove. Ndiri munzira kuenda kuDell Tech World muLas Vegas, ndakanyora tsamba mumugwagwa ndichitsanangura zvimwe zve maficha eiyo nyowani Chrysler Pacifica Ini ndairoja. Ini handina chokwadi chekuzvimiririra mashandiro emota iyoyo yakaderedza njodzi yangu yekupinda mutsaona mukati merwendo rwangu rwemakiromita zviuru zvishanu.
Kutora mabasa? Nepo kufambira mberi kwese muhunyanzvi kuchibvisa kudiwa kwemamwe mabasa, mabasa matsva ari pano. Makumi matatu emakore apfuura, hapana munhu akafungidzira (kusanganisira ini) kuti ndinenge ndichimhanya nedhijitari agency uye ndichigadzira podcast yekambani yakatanga nekutengesa makomputa akagadzirwa pamba kubva mugaraji. Ndine zviuru zvevandinoshanda navo vanobhadharwa-zvakanaka mabasa asina kumbovapo makumi mashoma apfuura.
Ini ndinogona kunge ndiri mune vashoma kana zvasvika kune otomatiki. Ndiri munhu asina tariro anotenda otomatiki haisi kutora mabasa; iri kubvisa zvipingaidzo kune zvakatowanda. Sechikamu chemwaka uno we Zvimwenje podcast, takabvunzurudza muvambi we DAQRI, yakasimbiswa chaiyo kambani iyo yakabatanidza software uye Hardware kune mune system inonzi Workense.
Sanganisa mushandi ane hunyanzvi ane AR chikuva senge DAQRI iyo inogona kuburitsa manotsi, kurairwa, uye kunyange kutokubatanidza iwe kune nyanzvi mune chaiyo-nguva… uye kuti mushandi anogona kugona kudzivirira uye kugadzirisa kugadzirisa pamidziyo yavanogona kunge vasina kana kudzidziswa . Saka, izvo zvinogona kuwedzera mikana yedu yebasa, kwete kutsiva.
Tekinoroji iri kuramba ichishanda zvakare. Kuwedzeredzwa kwekuchengetedza, simba remagetsi, uye kuwedzerwa kwedata mareti ane akanyanya kuderedzwa maficha emagetsi ari kubatsira kudzikisa simba pabasa rebazi, kwete kuwedzera iro. Uye zviri kutibatsira kushandura echinyakare maindasitiri isu atisina kumbofungidzira kuti anogona kudzoreredzwa. Aerofarmssemuenzaniso, iri kuwedzera goho remapurazi ne 390% nekuvaendesa mukati, kugadzirisa zvisingadhuri, mwenje unodhura wakatarirwa chirimwa chimwe nechimwe uye kudzikisira kudiwa kwemvura ne95%. Kurima kwemukati kunogona kuita kuti chikafu chine hutano chitengeke uye chinowanikwa nemunhu wese wepasi.
Ini ndinoramba ndichinyevera vatengi vangu kuti isu tiri mune itsva wave yekushanduka kwetekinoroji. Scalable computing simba, yakakwira-mhanya isina waya kubatana, uye isina muganho chengetedzo vari kuvhura gedhi ku chakagadzirwa njere, kudzidza kwakadzama, kudzidza kwemuchina, kugadzirisa mutauro, uye iyo Internet Zvinhu.
Hazvisati zvatengeswa? Google ichangobva kuburitsa demo rayo Google Assistant izvo zvinofanirwa kuchinja pfungwa dzako. Google Mubatsiri ari pamberi pekutungamira - kuraira yako IoT chishandiso kuti iite musangano wako. Iko kusimba kwekufambira mberi uku kunogona kuviga chaizvo vakwikwidzi veGoogle vakaita seApple neAmazon kana vasingakwanise kuenderera. Kunyangwe izvo zvingangonzwika sezvisingaite, yeuka kuti vanhu havana kumbofunga kuti Nokia neBlackberry vangarasikirwa nehutongi hwavo, futi.
Iwo ma masomo haapo emakambani eetekinoroji chete, chidzidzo chekambani yega yega. Zvese zvigadzirwa uye sevhisi pano pasi zvinogona kuvandudzwa kana kutsiviwa neiyo theses matekinoroji Yese kambani inogona kugadzira kubatana kune mutengi iyo yanga isipo kare. Imba yangu yeHVAC system iri kutsiviwa svondo rinouya neimwe nyowani, inoshanda zvakanyanya system.
Ndichiri kutarisira imba inotonhorera uye yakaderera magetsi bhiri, kufambira mberi kukuru ndekwekuti kambani iri kuisa programmable thermostat uye yekutarisa system. Sisitimu yacho inouya newarandi yemakore gumi… uye iyo yekutarisa inozivisa kambani yangu yeHVAC kana paine nyaya. Iyi kambani yebasa ikozvino ine gumi-gore rakanangana nekubatana kune mutengi wayo kuburikidza neiyi chikuva - pasina chikonzero chechitatu-bato chikuva kuti spam yangu. Iyi ndiyo yakanyanya chengetedzo yevatengi system, zvachose. Uye, semutengi, ndinogamuchira kubatana!
Zvakakosha kuti kambani yako itange kufunga nezve maitirwo aungaita nekutonga indasitiri yako kambani yako isati yapera mukukanganwa.
Maitiro Ewebhu Chengetedzo Anobata Sei SEO